EX - ABSDF: "တရုတ်ပြည်နှင့် ဂြိုဟ်သား ဆက်စပ်မှု (၁)"
Grey Aliens ‪#‎သူတို့တွေက‬ ဘယ်သူတွေလဲ?
‪#‎ကမ္ဘာမြေကို‬ သူတို့ ဘာလာလုပ်ကြပြီး ဘာတွေထားရစ်ခဲ့တာလဲ?
‪#‎အဲဒီနောက်‬ သူတို့ ဘယ်ကို ရောက်သွား ကြတာလဲ?
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ၊ (၂၆) ရက်။
တရုတ်ခေါင်းဆောင် "မော်စီတုန်း (Mao Zedong)" လက်ထက်မှာကတည်းက အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သူ "ဒေါက်တာ ဆွန်ရှီလီ (Dr. Sun Shili)" က ကနေဒီယံ သတင်းစာနှင့် တွေ့ဆုံပွဲမှာ
"တရုတ်အစိုး ရသည် အခြားကမ္ဘာမှ ဂြိုဟ်သားများ ကမ္ဘာမြေပေါ် သို့ လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းကို သိရှိထားကြောင်း" တရားဝင် ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်သည့် အတွက် တကမ္ဘာလုံး အုတ်အော်သောင်းနင်းး ဖြစ်သွားခဲ့ရပါ တယ်။
တရုတ်အစိုးရ အနေနဲ့ ဒီကိစ္စ အပေါ် ယခင် ကတည်းက အလေးထား၍ ဆွေးနွေးခြင်း၊ လေ့ လာခြင်း၊ အပြန်အလှန် သတင်းမျှဝေခြင်းများရှိ ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် လက်နက်ကိုင် တပ်မတော်၊ လေတပ်နှင့် အရပ်သားပိုင် လေကြောင်းလိုင်း တို့နှင့် အစဉ်အမြဲ စောင့်ကြည့်နေကြောင်းလည်း အင်တာဗျူး တစ်ခုမှာ ထုတ်ဖော် ပြောကြားသွား ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်သို့ "ယူဖိုး" ဟုခေါ်သော "အမျိုး အမည် မသိ ပျံသန်းနေသောယာဉ် Unidentified Flying Object (UFO)" များ မကြာခဏ လာရောက် လေ့ရှိတာကို တရုတ်ပြည်သူ အများကလည်း သိရှိ ထားပါတယ်။
ဆွန်ရှီလီ၏ အဆိုအရ တရုတ်အစိုးရသည် ဂြိုဟ်သား များ လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းကိုသာ မကဘဲ အချို့ ဂြိုဟ်သားများသည် တရုတ်လူမျိုးများအကြား လူ့ အသွင်အပြင် ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ဖြင့် တည်ရှိနေကြောင်း ကိုလည်း သိရှိထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုစကားကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလျှို့ဝှက်ဆုံး နိုင်ငံနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းလို့ ဆိုရမယ့် တရုတ်ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးက လူသိရှင်ကြား ပြောကြားလိုက်ခြင်းသည် ခေတ်တစ်ခု၏ တော်လှန်ရေး ခေတ်ပြောင်းကာလ လို့ ဆိုရင်လည်း မှားလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
ချယ်ယာမင် မော်စီတုန်းနှင့်တွဲ၍ အလုပ်လုပ်ခဲ့စဉ် ကာလ ၁၉၇၂ ခုနှစ်မှာ "ယူဖိုး အာကသယာဉ်" သို့တည်းမဟုတ် "ပုဂံပြားပျံယာဉ်" ကို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ မြင်ဖူးကြောင်းကိုလည်း ဒေါက်တာ ဆွန်ရှီလီက ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
ကမ္ဘာ့သမိုင်းစဉ်တစ်လျှောက်မှာ အာဏာပါဝါ အရှိဆုံး ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်သည့် မော်စီတုန်းနှင့် အလုပ်အတူ တွဲလုပ်ခဲ့ဖူးသူ ဆွန်ရှိလီအနေနှင့် အခြားကမ္ဘာက ဂြိုဟ်သား တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိနေသလို သူကိုယ်၌လည်း ယုံယုံကြည်ကြည် ရှိနေပြီး ကမ္ဘာသိအောင် ထုတ်ဖော်ပြောလိုက်သည့် အတွက် ကမ္ဘာကြီးနှင့် ကာလပေါင်းများစွာ သီးသန့် အထီးကျန် နေခဲ့သည့် တရုတ်ပြည် ကြီးဟာ ဂြိုဟ်သားတွေနှင့် လျှို့ဝှက်စွာ ကြိတ် ပြီး အဆက်အသွယ် ရှိနေတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိနေပါတယ်။
ထိုသို့ရှိ၊ မရှိ တရုတ်ပြည်ရဲ့ သမိုင်းကို နောက် ကြောင်းပြန် ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
တကယ်တော့ တရုတ်ပြည်ကြီးဟာ အစဉ်အမြဲ အမြင် ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခုရယ်ပါ။
အခြားနိုင်ငံတွေအပေါ် အာရုံခံစားမှု မရှိလှဘဲ အရေးကြီးတယ်လို့လည်း ထင်မှတ်မထား သ လို တရုတ်ပြည်သည် တရုတ် လူမျိုးအတွက်၊ တရုတ်ပြည်သည် တရုတ်ပြည်အတွက်သာ လျှင် ဖြစ်တယ်လို့ အတ္တကြီးစွာ အမြဲ ခံယူ ထားသည်သာမက အတွင်း သတင်းပလင်း ပေါက်ကြားမှာကိုလည်း လွန်စွာ သတိကြီးစွာ ထားတဲ့ နိုင်ငံမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
အများနှင့်လည်း ရောနှော ဆက်ဆံခြင်း ပြုလေ့ မရှိဘဲ မကောင်းသတင်း အများအပြားနဲ့ ကျော် ကြားလျှက် လွန်စွာ လျှို့ဝှက်မှုရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး အနေအထားမျိုးရှိတဲ့ နိုင်ငံမျိုးဟာ "ယူဖိုး (UFO)" နှင့် ပတ်သက် ဆက်ဆံမှု ရှိနေခြင်းသည် ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင် တစ်ခုခု ကို သေချာပေါက် သိရှိထားတာ သို့မဟုတ် တစ်ခုခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတာကလွဲ အခြား မဖြစ်နိုင်လို့ ယူဆစရာ ဖြစ်နေ ပါတယ်။
သို့သော်လည်း "ယူဖိုး" ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရုတ်အစိုးရရဲ့ အမြင်ကို ဘယ်တုန်းကမှ တ ရားဝင် ထုတ်ဖော် ပြောကြားခြင်း မရှိ သလို အခြား နိုင်ငံများနှင့်လည်း ယခုအကြိမ်မှ လွဲ ယခင်က တကြိမ် တခါမျှ သတင်း ရှယ်ခြင်း၊ တွေ့ဆုံ မေးမြန်း၍ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း မရှိ ခဲ့ဖူးသော်လည်း ထိုအရေးကို အလေးထား လေ့လာလျှက် ရှိနေတယ် ဆိုတာကတော့ သေချာသလောက် ရှိပါတယ်။
စိတ်ဝင်တစားဖြစ်ပြီး အဓိက စမ်းစစ်မိရတဲ့ အချက်ကတော့ တရုတ်လေပိုင်နက် ကောင်း ကင်ယံမှာ စစ်လေယာဉ်တွေ စစ်ရေး လေ့ကျင့် ကြတိုင်း မကြာခဏ ဆိုသလို ယူဖိုးတွေကို မြင် တွေ့ ကြရာမှ အစပြုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တရုတ်ပြည်ကြီးသည် ကမ္ဘာ့အလယ် ကျော်ကြား ထင်ရှားသော နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ယုံမက ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ခေတ်သစ် မော်ဒန် ယဉ်ကျေးမှုကို အချိုးညီစွာ ရောသမ မွှေထားတဲ့ တိုင်းပြည် တစ်ခု လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လျှို့ဝှက်မှုအပေါင်း သရဖူဆောင်းတဲ့ တရုတ်ပြည် ကြီးကို မိုင်ပေါင်း (၁၃,၀၀၀) ကျော် မဟာ အုတ်တံ တိုင်း (Great Wall)" နှင့် ရှေးယခင်ကတည်းက ကာရံပြီး အခြား ကမ္ဘာ့တိုင်းပြည်များနဲ့ အဆက် ဖြတ်ထားခဲ့သလို ယခု မော်ဒန်ခေတ်မှာလည်း အင်တာနက် အသုံးပြုရာမှာ "မဟာမီးလျှံတံတိုင်း (Great Fire Wall)" နဲ့ ကာရံ ထားပါတယ်။
"ဂူဂယ်၊ တွီတာ" စသည်များမှ အချက်အလက်တိုင်း ကို တရုတ်အစိုးရရဲ့ စီစစ်မှုအောက်ကနေမှသာလျှင် ကြည့်ရှုခွင့် ရပါတယ်။
မဟာ အုတ်တံတိုင်း၊ မဟာ မီးလျှံ တံတိုင်းတွေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ တရုတ်ပြည်ကြီးကို တရုတ် ကွန်မြူနစ် အစိုးရ အဆက်ဆက်က ကာရံထားရပါသလဲ?
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၅,၀၀၀) က တရုတ်ပြည် ကြီးကို စတင် အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက် ခဲ့သော "အဝါရောင် အင်ပါယာ (Yellow Emperor) ခေတ်ကို လေ့လာမှသာလျှင် အဖြေမှန်ကို တွေ့ရှိနိုင် ပါလိမ့်မယ်။
ဒီအကြောင်းကိုတော့ နောက်တခန်းမှာ ဆက်ရေး ပါရစေ။
Andrew Soe ၂၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၆။
"ပုံများမှာ တရုတ်ပြည်ကြီးနှင့် ဒေါက်တာ ဆွန်ရှိလီ၊ ဂြိုဟ်သားများနှင့် ဆက်စပ်ပုံ အချို့ ဖြစ်၏။